HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်က Metro ဒီရက်သတ္တပတ်ကြံ့ခိုင်ရေးဖြည့်
27 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
ယခုနှစ် 2015 ကတည်းကကျင်းပသောဥရောပအားကစားအပတ်အောက်မှာအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), "အဲဒီမှာက Metro အားကစား" အားကစားမြေအောက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ 23 30 လှုပ်ရှားမှုများအစ္စတန်ဘူလ်၏စက်တင်ဘာလအတွင်းစတင်အထိရွှေ့ပြောင်းစဉ်ကိုပိုမိုအိမ်မှုဝေယျာဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုအားပေးအားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အားကစားနေ့အပတ်မဟုတ်ပါ 1 365
IMM, အစ္စတန်ဘူလ်၏လူများကျန်းမာသန်နှင့်ပိုပြီးတက်ကြွဘဝတွေကိုအသက်တာ၏မောင်းနှင်မှုအရည်အသွေးကိုတိုးတက်လာဖို့ထောက်ခံမှုပေးပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဆက်လက်။ အဆိုပါကမ်းခြေပေါ် On-site အားကစားအဆောက်အဦ, ပန်းခြံများနှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများ IMM နှင့်အတူလမ်းလျှောက်အတူမည်သူမဆိုဝင်ရောက်ဖြစ်ဖို့ကဖွနှင့်အားကစားလယ်ကိုရွရွပြေးခြင်း, ဥရောပအားကစားအပတ်အတွင်းနိုင်ငံသားများရဲ့အသိအမြင်မြှင်လှုပ်ရှားမှုများစည်းရုံးရေးဖြစ်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးလမ်းကြောင်း, စက်ဘီးပြိုင်ကားခြင်း simulation, အားကစားနှင့် Mini-ဂေါက်ကွင်း, လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်စရာ-ဖြည့်လှုပ်ရှားမှုများ, အားကစားဖြစ်ရပ်များ, အံ့သြဖွယ် Yenikapi မက်ထရိုဘူတာမှဧည့်သည်များစောင့်ဆိုင်း။
လမ်းရထားလူမျိုးအသုံးပြုပုံအနိုင်ရရှိ SPORTS ဖွစျသညျ
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ဖြစ်ရပ်များ၏မူဘောင်အတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ကိုမျက်မြင်။ မစ္စတာ Grant ကအားကစားသမား Batuhan Eruygur နှင့်ရထားယာဉ်မောင်းအဆိုပါ finish ကိုလိုင်း Kaan settings ကိုရောက်ရှိဖို့ရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပြင်းထန်စွာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ချီးမြှင်။ မစ္စတာ Grant က၏ဘူတာအကြားပြိုင်ပွဲအတွက် Eminonu နှင့် Karakoy Batuhan အောင်ပွဲ၏ T1 Bagcilar-ကျောက်စာလမ်းရထားလိုင်းကို Eruygur ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 110 ရဲ့ဒုတိယ, 14 မီတာ 60 မီတာမသန်စွမ်းနျဌာနခှဲအတွက်တူရကီအားကစားသမားသမိုင်း 8 ဒုတိယပထမဦးဆုံးတာကအားကစားသမားအောက်မှာ run ကြောင်းချို့ယွင်းအကိုင်းအခက် Eruygur သူ့ကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဘို့အကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါထုတ်ပြန်ချက်များအသုံးပြုခဲ့သည်ခေါင်းစဉ်ထမ်းစဉ်:
"ဒါဟာဒီပြိုင်ပွဲအားကစားအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်ဆုရှင်၏အားကစားအကြောင်းကိုအသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်ထွက်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းတွန်းသိကြပေမယ့်အမှန်တကယ်ကန့်သတ်။ ကျနော်တို့ဟာအလွန်ကောင်းသောတုန့်ပြန်ရတဲ့ပါတယ်။ ဒီအသိအမြင်ဖွင့်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူအလုပ်ကသူတို့အလုပ်အပေါ် အခြေခံ. ပေးသောဆုမှအမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်လာမည့်နှစ်တွင်ဥရောပကော်မရှင်အနေဖြင့်ဆုချီးမြှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုယူချင်တယ်။ "
အားလုံးအသက်အရွယ်နိုင်ငံသားများနှင့်ဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အမြင်များကိုနားထောင်နှင့်ပိုပြီးလှုပ်ရှားမှုသောအစ္စတန်ဘူလ်, chat ပြီးနောက်ပိုအားကစားအဆောက်အဦများနှင့်အားကစားသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို, ဖြစ်ရပ်များအားကစားအစ္စတန်ဘူလ်မှ General Manager Renay Onur တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်သွားရောက်လည်ပတ်၏İstanbulluအသက်ရှူနှင့်အတူတစ်မြို့ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်ပိုပြီးလိမ်ယှက်တိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များကိုလူများအားပေးအားမြှောက်ခေတ္တလ၏အဆုံးသည်အထိဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပတ်ကြာလုပ်ငန်းများကို Yenikapi မက်ထရိုဘူတာရုံများတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဘူတာရုံမှာအံ့သြစရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဘူတာဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ:
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 26
16: 00-19: 00 Unal မီထရိုဘူတာ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 27
16: 00-19: 00 Taksim မီထရိုဘူတာ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 28
16: 00-19: 00 မီထရိုဘူတာ Altunizade
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 29
16: 00-19: 00 Kadikoy မီထရိုဘူတာ
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 30
16: 00-19: 00 Yenikapıမီထရိုဘူတာ
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်မိုးသီးမင်ျဂ Konya အတွက်လွန် 24 / 09 / 2019 ဥရောပ2တထောင် Konya မြို့မှာရှိတဲ့ဥရောပအပတ်များ၏ဘက်ဇ်, Konya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အားကစားကွင်းနှင့်အတူကျင်းပထက်ပိုလာမယ့် "မော်တော်ကား-အခမဲ့နေ့ပွဲ" ဖျော်ဖြေအတူတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ နံနက်ယံ၌လေ့ကျင့်ရေး, ထို့နောက် meddah ပြဇာတ်ရုံနှင့်ဘားဂျွမ်းအတတ်ပြပွဲ၏ယဉ်ကျေးမှုကျောင်း, ဆန္ဒပြပွဲများလမ်းကြောင်းစကိတ်စီးနှင့်စက်ဘီးစီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြစဉ် Janissary Band ဖျော်ဖြေပွဲလှုပ်ရှားမှုများအားကစားနှင့်အတူစတင်။ နေဆဲAkgünနှင့် Konya မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mustafa Uzbaşပါဝင်မှုအဆိုပါဆု၏အခြေတည်လမ်းလျှောက်ထိရောက်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာအစီအစဉ်၏အဆုံးမှာအမျိုးမျိုးသောပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူအားပေးပြီးမှခဲ့ကြသည် "ကျနော်တို့လမ်းလျှောက်အတူတကွ" အသကျရှငျအသိအမြင်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်လက်ထောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဆင့်။ Altai ကျေးဇူးတင်စကားသမ္မတ Konya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Ugur ရှိပါတယ် ...
တူရကီမြေအောက်ရထားအတွင်းသဘာဝဘေးခဏ 06 / 01 / 2019 တူရကီက Metro, လျှပ်စစ်စနစ်များကိုမီးစများ၌၎င်းနှင့်မီးတောက်များဖြစ်ပေါ်၏ပျက်ကွက် results မှဖြစ်ပေါ်ဖို့ဟန်အချိန်တစ်ကာလအတွင်းကြောင့်မီးရထားမှနှောင့်အယှက်နေကြသည်။ ပါတိတ်ရုတ်တရက်ပြတ်တောက်ကျော်İvedik tubular တံတား, မီးရထား, ဧဒုံလခြမ်းမှနျလှုံ့ဆျောရာမှဦးတည်ချက်နှင့်ရလဒ်လှုပ်မှတော့ဘူး။ ရေတိုရေရှည်လမ်းကြောင်းသစ်အတွက်ကြောင့်ရထား၏အရှေ့ဘက်ကနေမီးစများ၌၎င်းနှင့်မီးတောက်များထိတ်လန့်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ကိုတှေ့မွငျဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်အသက်တာ၏ဒဏ်ရာ, အရှုံးခံရမမီးသတ်သမားကြားဝင်ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ပြုပြင်လုပ်ငန်းစဉ်၏မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေး 40 မိနစ်ကိုယူအချိန်ကာလတစ်ခုအထိနှောင့်အယှက်ပါပြီ။ (Habersol)
အစ္စတန်ဘူလ်ဖှယျအိပ်မက်ဆိုးနှင့်ပြည့်ဝ၏ 10 / 05 / 2016 အစ္စတန်ဘူလ်အိပ်မက်ဆိုးနှင့်ပြည့်ဝ၏နေ့ရက်ကာလအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်သူ AKP ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာစီမံကိန်းများကို3မိတ်ဆက်ပေးသည်။ တံတားများ,3။ လေဆိပ်, တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်, Eurasia ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုမွို့ 40 သန်း၏လူဦးရေကိုတိုးမြှင့်စေမည်။ အဆိုပါမြို့တမြို့လုံး၏လူဦးရေမှာအနည်းဆုံးနှစ်ခုသည်းခံရ၏မည်သည့်အခါတူရကီရဲ့မီဂါမြို့ကုမ္ပဏီကြီး Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံစီမံကိန်းများကိုဘဝထံသို့လာ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်၌တည် ပို. ပင်လူနေထိုင်မှုမရှိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးတစ်ခုတည်းကိုသာအချို့စီမံကိန်းများကိုမြို့တော်ရဲ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, လေအစိမ်းရောင်ဧရိယာတစ်ခုထိုးနှက်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ နိုင်ငံသားတွေကိုအစိုးရကအစီအစဉ်များနှင့်ကျန်းမာပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နီးစပ်သောကုမ္ပဏီများအားပေးသောစီမံကိန်းများအများစုနီးပါးမျှမြို့ပြဘဝကိုစဉ်းစားခဲ့အိတ်ကပ်ထဲမှာအခွန်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်အတူအကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ ဘီလျံပေါင်းများစွာ ...
ပါတိတ် - Sincan Metro တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အခမဲ့
အစ္စတန်ဘူလ်က Metro အားကစားလေတိုက်နှုန်း